Ny mpangalatra varimbazaha alimo Sina - Zhejiang Shuanglin Jiate Teknolojia Teknolojia, Ltd.
Ny toetoetran'ny alim-bary misy alim-bary Ny toetoetran'ny alim-bary (alim-bary) ho an'ny tavoahangy, potipoti-javatra, alim-bary (ala) dia manome azy ireo ho an'ny fampiasana amin'ny tsenambola maromaro ao anatin'izany ny sehatry ny cookie, automotive and lighting etc sns: anisotropy 1.Low, izay manamora kokoa sary mihotra 2.Strong toetra matevina 3.High sy homogenny diffusion ny hafanana 4.Ability ho noforonina, rakotry ny PTFE (na hafa), anodized 5.Good reflectivity 6. Hery avo-to-lanja tahan'ny 7.Durability sy ny fanoherana ny harafesiny Quick Details Grade: 1000 Series Misafoaka: O-H112 Type: Plate Fampiharana: cookware tsy tapa-kazo lapoaly / vilany, ary lakozia sns hateviny: 0.3mm-5mm Sakany: 100mm- 1360mm Legale na tsia: Modely tsy manjary: 3003 ...
1050 1060 1070 1100 3003 Taratasy ho an'ny alim-bary vita amin'ny alim-bary ho an'ny cookware 1. Alloy: 1100, 1050, 1060, 1070, 3003 2. Temper: O, H12, H14 3. Fahatelo: 0.3mm ~ 10mm 4. Ampidiro: 20mm - 1300mm 5. Karazana: Lisitra, Lisitra boribory, Circle, Disc 6. Ny baiko minitra: 500kgs isaky ny 7. Ny fandoavam-bola TT na Irrevocable LC amin'ny fisehoana dia ny famenoana ny alim-borona Aluminium Circle dia azo alaina amin'ny standard ny fanondranana, mandrakotra papier mainty sy sarimihetsika plastika. Farany dia mifototra amin'ny hazo palette hazo / hazo ny alimo Aluminium. Ny fampiharana ny aliminiôka Amin'ny maha-mpamatsy fototra ny Aluminium Circle, dia vita avy amin'ny alimo madio sy ...
Aluminium disc Surface Finish: Bright & smooth surface, without line lines, slightly oiled to avoid Whiterusting. Tsy misy solon-tsakafo, tsy misy menaka, tsy misy solika Mihidy ny fitaovana: tsy misy tanteraka amin'ny hadisoana toy ny White Rust, paty solomaso, vatosoa marika, fahavoazana havoana, kamera, dendrina, tapa-kazo, tapa-bolana, scratches ary malalaka amin'ny kodiarana napetrany. Manana laza tsara eo amin'ny mpanjifanay izahay noho ny vidin'ny aluminium misy vidiny avo lenta sy mahavoarohirohy; Manana fankasitrahana avo dia avo amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny sambo tsara indrindra sy ny fahaiza-miasa matihanina. Ny kalitao dia mifanaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001. Izy io dia fitaovana amin'ny 5 mafana ...
Description: Amin'ny maha-mpamatsy voalohany ny Aluminium Circle, dia vita avy amin'ny alimine madio ary ampiasaina amin'ny cookware sy engineering, toy ny mahandro sakafo, tanjona mazava, cooker, frypan, tavoahangy, ketla, reflector ny hazavana, sns ... Manintona sy manatsara ny endriky ny kalitao Aluminium Circle Sheet azo omena. Ny Circumference Aluminium dia ny RoHS ary ny fanarahan-dalàna REACH ary ampiasaina amin'ny famokarana voaaro tsara. Ny faribolantsika dia fitaovana tena tsara ho an'ny famokarana fitaovam-pihinanana, fitaovana, vilany, kitay sy kesika. Item Aluminum Circle 3003: Standard ASTM B221M, GB / T 3191, Jis H4040, sns firaka 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083 Specifications hateviny 0.25 - 6mm savaivony 50 - 1200mm. Dingana: mafana mangatsiaka ...
1 XXX mpanamboatra aluminium 1. Anisan'izany aluminio madio indostrialy. 2. Ny dity kely, ny fitondran-tena tsara, ny fitondran-tenan'ny fitondran-tena ambony, ny hafanana hafanana, ny kisary ny taratra taratra, ny tontolon'ny hafanam-pandrefesana ny hafanana ary ny hatsarana dia tsara tarehy. 3. Aluminium aluminium amin'ny rivotra mba hamorona sarimihetsika matevina sy matevina, manakana ny fanosehana ny oksizenina, noho izany dia manana ny toetran'ny fanamafisana ny harerahana tsara. 4. Ny fihenan-tseranana ambany kokoa, ny 1 XXX dia famoahana metaly fanamafisana ny alika fampirimana dia tsy afaka mahomby amin'ny fampiroboroboana, fa ny fomba fiasa mangatsiaka ihany no natao mba hanatsarana ny tanjaka. Fanamarihana: Ny fepetra takiana manokana amin'ny fitombenana, ny fifehezana ...
Famaritana: Nampiasaina nanerana an'i Shina sy firenena hafa ny faribolan'ny alim-bary. Mirehareha amin'ny alàlan'ny kalitaon'ny alim-by izahay, ny kalitao hitarika ny hoavy. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra karazan-damba maro samihafa. Amin'ny maha-mpanamboatra antsika, afaka manome entana avo lenta sy ambany vidiny isika. Ny Aluminium Circle / Disc dia ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra sy indostria ankapobeny, toy ny trondro capacitor, trondro dendroka, fitsaboana medikaly, kitapo fikarakarana sakafo, tavoahangy tavoahangy, trondro kosmetika ary trondro fanenon-jiro sns. Ny fitaovam-pamokarana toy ny fitaovana ampiasaina dia miseho amin'ny alalan'ny hafa ...